.လူတိုင်း အောင်မြင်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဂျင်း ယုံတမ်းစကား နှင့် မတူညီတဲ့ အခွင့်အရေး. – Thukhuma
.လူတိုင်း အောင်မြင်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဂျင်း ယုံတမ်းစကား နှင့် မတူညီတဲ့ အခွင့်အရေး.
လူတိုင်း အောင်မြင်နိုင်တယ် ဆိုတဲ့ ဂျင်း ယုံတမ်းစကား နှင့် မတူညီတဲ့ အခွင့်အရေး..
ကျွန်တော် ဝန်ထမ်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရတဲ့ အရာရှိဖြစ်လာတော့ ခပ်ငယ်ငယ်ပဲရှိသေးတယ်။ သိပ်လုပ်ပြချင်တဲ့အချိန်ပေါ့။ မနက်ဆို အစောကြီးလာ ညနေနောက်ကျမှပြန် အလုပ်မှအလုပ်။ ကျွန်တော်ကြည့်မရတဲ့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ရှိတယ်။ အဲဒီတစ်ယောက်ဟာ တစ်ပတ်မှာ အနည်းဆုံး တစ်ရက်လောက်တော့ ရုံးနောက်ကျတယ်။ ခွင့်မကြာခဏယူတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့အလုပ်တော့သူပြီးတယ်။ စိတ်ထဲမှာတော့ သိပ်နေလို့မကောင်းဘူး။
ဒီဘဲဟာ ငါ့ကိုလာစမ်းနေတာလား။ ရုံးနောက်မကျချင်ရင် စောစောလာပေါ့။ ငါတောင်မနက်အစောကြီးရောက်နေသေးတာ သူလည်းရောက်ရမှာပေါ့။ ခွင့်ကလည်း ခဏခဏယူသေးတယ်။ ဒီလိုလူမျိုးဖြုတ်ပစ်ရမယ်။ အဲဒီလိုအတွေးနဲ့ သူ့ကိုမျက်နှာသာလည်းမပေးဘူး။ နောက်ကျတိုင်းလည်းခေါ်ဆူတယ်။ ဆူတိုင်းလည်း မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ တောင်းပန်တာပဲ။ စိတ်ထဲမတော့ မကြိုးစားချင်တဲ့ကောင် ရုန်းထွက်ချင်စိတ်မမွေးတဲ့ကောင် ငပျင်းကောင် ဒီလိုလူမျိုး ဘယ်တော့မှ ကြီးပွါးမယ့်ကောင်မဟုတ်ဘူးလို့ အမြဲတွေးတယ်။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တော့ ဆရာကြီး။ ငါက သိပ်ကြိုးစားချင်စိတ်ရှိတဲ့ကောင်ပေါ့လေ။
နောက်မှ သိရတာက သူကယုဇနဥယျာဉ်မြို့တော်ဘက်ကနေလာရတယ်။ ရုံးရောက်ဖို့ ကားနှစ်ဆင့်စီးရတယ်။ ပိုဆိုးတာက သူ့အဖေရော အမေရောက ရောဂါသည်တွေဖြစ်နေတဲ့အပြင် သူ့အိမ်မှာသူကပဲ ပြုစုစောင့်ရှောက်ရတဲ့သူဖြစ်နေတယ်။ မကျန်းမာတဲ့မိဘတွေကို ပြုစုရတယ် ပိုက်ဆံရှာရတယ်။ ဒီတော့ သူ့မှာ ကြိုးစားဖို့အချိန်လည်းမရှိဘူး အင်အားလည်းမရှိတော့ဘူး။ သူနဲ့ယှဉ်ရင် ကျွန်တော်က ရုံးကို ကိုယ်ပိုင်ကားနဲ့လာတယ်။ မနက်ဆိုနိုးတာနဲ့ စားဖို့သောက်ဖို့အဆင်သင့်လုပ်ပေးထားတဲ့ ကျန်းကျန်းမာမာ မိဘတွေရှိတယ်။ ဘဝက လူတိုင်းအတွက် ရုန်းကန်ရတာပဲလို့တွေးရင် သူ့ရုန်းကန်နေရမှုနဲ့ယှဉ်ရင် ကျွန်တော်ရုန်းကန်နေရတယ်ဆိုတာ ရယ်စရာပဲ။
အဲဒီနောက်ပိုင်း ကျွန်တော်ဘာကို နားလည်လာလဲဆိုတော့ လူတိုင်းမှာ ပေးထားတဲ့ အခွင့်အရေးချင်း နောက်ခံအကြောင်းအရင်းမတူနိုင်ဘူး။ လူတိုင်းကို ပေတံတစ်ချောင်းတည်းနဲ့တိုင်းတဲ့အခါ အဖြေမှန်ရဖို့ခဲယဉ်းတယ်ဆိုတာကို သဘောပေါက်လာတယ်။ မင်းကြိုးစားစမ်းပါ လူတိုင်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်လို့ ပြောဖို့ လိပ်ပြာမလုံတော့ဘူး။ ကျွန်တော် သူ့နေရာ သူ့အခြေအနေနဲ့ဆိုရင် သူ့ထက်ပိုဆိုးတဲ့ဘဝရောက်မနေနိုင်ဘူးလို့ အာမမခံနိုင်ဘူး။ စားဖို့သောက်ဖို့နေဖို့အတွက် မပူမပင်နေရတဲ့သူတွေက ဘယ်လောက်ဆိုးတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ ကြုံတွေ့နေရမှန်းမသိတဲ့သူတွေကို ကြိုးစားရင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်။ မင်းမွဲနေတာ မင်းအသုံးမကျလို့လို့ ပြောတာ ဘယ်လောက်ဆိုးရွားတဲ့အပြုအမူလဲလို့ ကျွန်တော်တွေးမိလာတယ်။ အသက်အရွယ်ကလည်း စကားပြောမယ်ထင်ပါတယ်။ အသက်ကြီးလာနဲ့အမျှ ကျွန်တော့်အတွေးတွေဟာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ဘက်ကို ပိုရောက်လာတယ်။ ငါ့လို လူတိုင်းလုပ်နိုင်ရမယ်ဆိုတာထက် သူ့ဘက်မှာ ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေများရှိနေနိုင်မလဲလို့ ပိုတွေးဖြစ်လာတယ်။
ကျွန်တော်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် မိုတီဗေးရှင်းစပီကာတစ်ယောက်အဖြစ် ဘယ်တုန်းကမှ မယူဆခဲ့ဖူးဘူး။ ကျွန်တော်ရေးသမျှ ပြောသမျှဟာ ကျွန်တော့်အတွေးနဲ့ လုပ်ရပ်တွေကိုပဲ ကိုယ်စားပြုတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်က လိပ်ပြာသန့်ဖို့က အရမ်းအရေးကြီးတယ်။ ကျွန်တော့်အတွေးဟာ အမြဲကိုယ်ချင်းစာစိတ်ပေါ်မှာပဲ အခြေပြုတယ်။ ကိုယ်တိုင်မလုပ်နိုင်တဲ့ မလုပ်ချင်တဲ့အရာတစ်ခုကို တခြားသူတစ်ယောက်ကို ခိုင်းစေတိုက်တွန်းတာမျိုး ဘယ်တုန်းကမှ မလုပ်ခဲ့ဖူးဘူး။ ကျွန်တော်ရေးသမျှပြောသမျှဟာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတိပေးတာမျိုးနဲ့ ကိုယ်လုပ်ကိုယ်တွေးတာကို ပြန်ထင်ဟပ်တာမျိုးလောက်ပဲ။ မိုတီဗေးရှင်းလုပ်ဖို့အတွက် ကျွန်တော့်အနေနဲ့ အထူးတလည်အားထုတ်နေစရာမလိုဘူး။ ကိုယ်လုပ်တာကိုယ်ပြောတယ်။ ကိုယ်တွေးတာကိုယ်ပြောတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့ အပြင်မှာဆုံဖူးတဲ့သူတွေ အလုပ်အတူတူလုပ်ဖူးတဲ့သူတွေဆိုရင် ကျွန်တော့်ပုံစံကို သိလိမ့်မယ်။
လူတိုင်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးဗျ။ ကျွန်တော်တို့မှာ ပေးထားတဲ့ အခြေအနေတွေ အခက်အခဲတွေ အခွင့်အရေးတွေက မတူကြဘူး။ စာမေးပွဲစစ်သလိုလူတိုင်းက မေးခွန်းအတူတူနဲ့ ရမှတ်သုညက စကြရတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ ဘဝပေးအခြေအနေကောင်းကောင်းကနေ ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့သူတစ်ယောက်က ကိုယ့်လောက်ဘဝအခြေအနေမကောင်းတဲ့သူတွေကို ကြိုးစားရင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တယ်။ အိပ်မက်တွေနောက်ကို လိုက်ပါ။ မင်းမွဲနေတာ မင်းအသုံးမကျလို့ပါဆိုတာမျိုးတွေက အလုပ်ဖြစ်တယ်လို့ ကျွန်တော်မယူဆဘူး။
တကယ်တမ်းမှာ အဲဒါကလည်း အဆိပ်အတောက်တစ်မျိုးပဲ။ စားဖို့နေဖို့မပူပင်ရတဲ့သူတစ်ယောက်က အိပ်မက်တွေနောက်ကိုလိုက်ပါ ကြိုးစားရင် ဘာမဆိုဖြစ်နိုင်တာပေါ့လို့ ပြောတာကို နားယောင်နေတာမျိုးက ထီပေါက်ထားတဲ့သူတစ်ယောက်က ရှိသမျှအကုန်ရောင်းပြီး ထီထိုးလိုက် ပေါက်မှာသေချာတယ်လို့ ပြောတာကို နားယောင်နေသလိုမျိုးပဲ။ တချို့စကားတွေဟာ နားထောင်ကောင်းတယ် အလုပ်မဖြစ်ဘူး။
လူတိုင်းတော့လည်းမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့တွေမှာ ပေးထားချက် နောက်ခံအကြောင်းရင်းတွေလည်းမတူပါဘူး။ ရုန်းကန်ရမှုတွေလည်း မတူပါဘူး။ အဲဒီအတွက် အပြစ်ရှိသလိုလည်း မခံစားပါနဲ့။